पद्मोदयको ७२औँ स्थापना दिवस - Pradesh Today पद्मोदयको ७२औँ स्थापना दिवस - Pradesh Today
पद्मोदयको ७२औँ स्थापना दिवस
जेठ ११, २०७५ जीत सागर जी.एम.
घोराही, १० जेठ ।
घोराहीमा रहेको पद्मोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो ७२ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । दाङको जेठो विद्यालयको रुपमा रहेको पद्यमोदयले बिहीबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ७२औँ स्थापना दिवस मनाएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार घर्तीको अध्यक्षता तथा प्रदेश सांसद अर्जुन श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भएको हो ।
विसं २००४ सालमा स्थापना भएको पद्मोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालयले ७२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. कृष्णराज डिसीले विद्यायलयको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्र्दै विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्दै गरेको बताए । पद्मोदय माविले प्राविधिक शिक्षातर्फ पाँचवर्षे अटो मोवाईल सञ्चालन गरेको उल्लेख गरे । उनले पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय राप्ती क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय भएको भन्दै विद्यालयले शिक्षण सिकाइमा नयाँ विधि लागु गरेको बताए । मन्टेश्वरी कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अंगे्रजी र नेपाली दुबै माध्यममा पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयमा पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
विद्यालयमा विभिन्न व्यक्तिले स्थापना गरेको अक्षयकोषको रकम २६ लाखभन्दा बढी भएको जानकारी दिए । शिक्षाको विकासका लागि पद्मोदयमा नमुना माविमा विभिन्न व्यक्तिले स्थापना गरेको अक्षय कोषको रकम २५ लाख ८२ हजार ४ सय १२ रहेको उनले बताए । त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद अर्जुन श्रेष्ठले राष्ट्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पद्मोदयले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
पद्मोदयमा अध्ययन गरेका धेरै विद्यार्थीले गरिमामय स्थान हासिल गरेको भन्दै विद्यालयको शिक्षक सिकाइप्रति प्रशंसा गरे । पद्मोदयमा आफूले पनि अध्ययन स्मरण गर्दै उनले विद्यालयको विकासमा आफूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेलले देशको विकासका लागि शिक्षाको विकास अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । पद्मोदय नमुना विद्यालय नाम अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिदै शिक्षाको विकासमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक समन्वय अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले घोराही उप–महानगरपालिकाभित्रका केही विद्यालयमा शिक्षकहरुले विद्यालयको नियमलाई नमानेको पनि बताए । संस्थागत विद्यालयले आफू खुसी शुल्क बढाएको भन्दै उनले तत्कालै शुल्क समायोजनको नीति ल्याइने स्पष्ट पारे ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विद्यालयमा उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षक तथा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको छ । विद्यालयले उत्कृष्ट छात्र–छात्रालाई पुस्कार एवं सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थी सन्देश रिजाल, सुप्रभा अधिकारीलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षक देवीदत्त शर्मा र देवा पौडेलले गरेका थिए ।
अनाधिकृत दोहन रोक
अभिसाप बनेको आरक्षण